Umphathi Wokubonisa: Yini abaphathi be-Login ku-Linux? | Kusuka kuLinux
Kulesi senzakalo, ngemuva kokwenza ukubuyekezwa okubanzi kokwaziwa kakhulu nokusetshenziswa kakhulu Izindawo zeDeskithophu (DE) y Abaphathi bamawindi (WM), Sizoma kwenye into noma ingxenye ye-GNU / Linux abanye abasebenzisi abanothando abavame ukuyikhetha, bayikhethe futhi / noma bayenze ngokwezifiso kwi-Distros yabo.
Futhi le nto noma ingxenye yeLinux akuyona enye ngaphandle kwe- «Abaphathi Bokubonisa», noma njengoba baziwa ngeSpanishi, ngaphansi kwamagama we Abaphathi besikrini sasekhaya y Abaphathi bokungena.
Ngaphambi kokungena endabeni, sizocacisa kafushane umqondo wento ngayinye yalezi zinto ezi-3 ukwenza konke kucace.
1 Izinto ze-Linux OS
1.1 Izindawo zeDeskithophu (DE)
1.2 Abaphathi bamawindi (WM)
1.3 Abaphathi Bezikrini Zasekhaya (DM)
2 Umphathi Wokubonisa: Abaphathi Bokungena
2.1 Abaphathi Bokubonisa Abakhona
Izinto ze-Linux OS
Izindawo zeDeskithophu (DE)
"Imvelo yeDeskithophu ayilutho ngaphandle kwesethi yesoftware edingekayo ukunikeza wonke umsebenzisi wohlelo oluthile lokusebenza indlela ebonakalayo, enobungani nenethezekile yokuxhumana. Lokho wukuthi, kungukuqaliswa kwe-Graphical User Interface (i-GUI) ehlelelwe ukuhlinzeka ngezinsiza zokufinyelela nezokumisa, ezinjengamabha wamathuluzi nokuhlanganiswa phakathi kwezinhlelo zokusebenza, ngokusebenza okufana nokuhudula nokudonsa, phakathi kokunye okuningi.". Bona okuningi lapha.
Abaphathi bamawindi (WM)
"Ingcezu yephazili elawula ukubekwa nokubukeka kwamawindi. Futhi lokho kudinga X Windows ukusebenza kepha hhayi kusuka ku Imvelo yedeskithophu, lefomu eliyisibopho. Futhi ngokusho kwe- I-ArchLinux Official Wiki, esigabeni sayo esizinikezele ku- «Abaphathi beWindows«, Lezi zihlukaniswe ngezinhlobo ezi-3, okuyizinto ezilandelayo: Ukunqwabelana, UkuThayela kanye neDynamics". Bona okuningi lapha.
Abaphathi Bezikrini Zasekhaya (DM)
"Kuyisixhumi esibonakalayo sokuqhafaza esiboniswa ekugcineni kwenqubo yokuqalisa, esikhundleni segobolondo elizenzakalelayo. Kunezinhlobo eziningana zabaphathi besikrini, njengoba kunezinhlobo ezahlukahlukene zabaphathi bamawindi nezindawo zedeskithophu. Laba baphathi bavame ukuhlinzeka ngezinga elithile lokwenza ngokwezifiso nokutholakala kwezindikimba ngalunye". Bona okuningi lapha.
Umphathi Wokubonisa: Abaphathi Bokungena
Abaphathi Bokubonisa Abakhona
Ama-DM angaba wohlobo I-CLI (Console) o I-GUI (Graphics). Phakathi kwalabo bohlobo lwe-CLI esingabala CDM y I-Getty kanye nezinye ezifanayo ezifana Rungetty, Fgetty futhi Mingetty. Ngenkathi, phakathi kwaziwa kakhulu futhi uncanyelwayo Abaphathi Bokubonisa ihluzo singasho okulandelayo:
Umphathi Wokubonisa we-GNOME (GDM): Ichazwe kuwebhusayithi yayo esemthethweni njengohlelo olulawula amaseva wokubonisa imidwebo futhi ilawula ukungena ngemvume kwabasebenzisi bezithombe Kusuka ku-GNOME.
Umphathi Wokubonisa we-KDE (KDM): Kwakuyi-DM endala ye KUSUKA KDE4, ebisuselwa ku-XDM ngakho yabelane ngezinketho zayo eziningi zokumisa. Iningi lalezi zinketho zachazwa ku-kdmrc.
Umphathi Wokubonisa Ideskithophu Elula (i-SDDM): Yi-DM yesimanje yeX11 neWayland ezenza sengathi iyashesha, ilula futhi yinhle. Okwamanje isetshenziswa kabanzi yi-DE KDE Plasma, ikakhulukazi ngoba isebenzisa ubuchwepheshe besimanje obufana neQtQuick, yona enika umklami ikhono lokwenza izindawo ezibushelelezi nezinopopayi zomsebenzisi.
Umphathi Wokubonisa Ukukhanya (LightDM) : I-DM elula futhi elula, esebenza njenge-daemon (isevisi) ekwazi ukusebenza phakathi kwezinto eziningi, amaseva wesikrini (ngokwesibonelo, X) lapho kudingeka khona nabaphathi bokungena ngemvume ukuvumela abasebenzisi ukuthi bakhethe i-akhawunti umsebenzisi nohlobo lweseshini ozosisebenzisa.
I-Simple Login Manager (SliM): I-DM endala futhi ephelelwe yisikhathi, kepha engasindi futhi kulula ukuyilungisa, edinga ukuncika okuncane, futhi ezimele ezindaweni zeDeskithophu.
Umphathi Wokubonisa we-LX (LXDM): I-DM elula eyenzelwe i-LXDE, kepha ingasetshenziswa ngaphandle kwayo.
Kunabanye abaningi, ikakhulukazi ukusabalala okudala, okuphelelwe yisikhathi noma okuncane noma okwaziwa njenge: I-XDM, i-WDM MDM, ne-Qingy.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana ne «Display Managers (DM)» ekhona ku- I-GNU / Linux, ukwazi okuthe xaxa ngabo ngokujula, njengoba besilokhu senza nge- Izindawo zeDeskithophu (DE) futhi i Abaphathi bamawindi (WM); inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Isiphathi Sokubonisa: Yiziphi Abaphathi Bokungena ku-Linux?
John Doe kusho
Sawubona, ama-DM ekhonsoli angabonakala endala kodwa asathuthuka ngokugcwele, ikakhulukazi akhanyayo afana nawo https://github.com/Crakem/xlogin, esihlokweni sabaphathi be-github yokubonisa ungathola okuningi. Singakwazi ukuhlunga uma sifuna kusuka kukhonsoli, isibonelo, futhi sengeza ikhonsoli yesihloko. Kunezihloko cishe yonke into, ngokwesibonelo umphathi wewindows weWM.
Kuhle ukuthi baqale ukuba namakhasi ngeSpanish asethula ezihlokweni ezithile ze-Linux, ngiyabonga !! XD
Phendula uJohn Doe
Ngiyabingelela, John Doe. Siyabonga ngokuphawula kwakho nokunikela kwakho ngeXlogin.
Ubuntu 20.10 "Groovy Gorilla" iza neKernel 5.8, Gnome 3.38 nokuningi